काठमाडौं , चर्चित निर्माता सन्तोष सेनले आफ्नो चौथो चलचित्रको नाम ‘मेरी मामु’ जुराएका छन् । आफ्नै प्रोजेक्ट आसुसेन फिल्म पोडक्सनबाट निर्माण गर्न लागेको चलचित्रको नाम ‘मेरी मामु’ जुराएका हुन् । नेपाली फिल्म बजारमा उनले निर्माण गर्ने फिल्मको नाम सार्बजनिक भएपनि सेन स्वयमले भने यसबारे भने मुख खोलेका छैनन् ।
यद्यपी उनले चलचित्रको नाम त्यही नै भएको खुलासा भने गरेका छन् । आफूहरुले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मात्र चलचित्रको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
असारको पहिलो साता छायाकंनमा जाने र नयाँ फिल्ममा आफ्नै ६ बर्षीय छोरा आयुव सेनलाई डेब्यू गराउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । यसअघि निर्माण गरेका चलचित्र प्रेमगीत र प्रेमगीत–२ बाट अत्याधिक सफलता हात पारेर हौसिएका सेन दर्शकले चाहेजस्तो मुभी बनाउने सोचमा छन् ।
सेनका अनुसार आफूले निर्माण गर्न लागेको चलचित्रले आमा र छोराको सम्बन्धलाई दर्शाउने छ ।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ २३, २०७५१८:४५
माधुरी दिक्षितकै कारण यी चर्चित अभिनेत्रीले परिवर्तन गर्नुपर्यो आफ्नो थर!
श्रद्धा कपूरको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक भएकै हो त ? देखियो यस्तो अनौठो चेतावनी सहितको तीन पोस्ट
सलमानको विवाहबारे प्रेमिका ईयूलियाले दिईन् आश्चर्यजनक जवाफ
चर्चित रियालिटी शो ‘सा रे ग म प’ का जज र होस्टको पारिश्रमिक कसको कति? जान्नुहोस्…
अमिर खानलाई लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप!घर-बार बिगार्न भूमिका रहेको खुलासा!
मुलुकभर हपहपी गर्मी बढेको बेला दिशा पटानीले हट बिकिनी फोटो शेयर गरेर अझ बढाईन् तापमान